Famokarana faran'izay betsaka: Ahoana ny fampiasana ny rindranasa Brain amin'ny lalina? | Avy amin'ny Linux
Taorian'ny lahatsoratray teo aloha momba ny kinova miorina farany farany sy ny fomba mety hametrahana ny mahaliana sy ilaina loharanom-baovao misokatra sy fampiharana hazo fijaliana antso atidoha, izay mamela manatsara ny famokarana mpampiasa eo amin'ny birao misy ny solosain'izy ireo, hanohy ity fampianarana ity amin'ny fomba fampiasana azy izahay.
Rehetra mba hanazavana tsara kokoa ny fampiasana sy fitantanana ny sasany amin'ireo tsara indrindra na tena azo ampiharina Plugins azonao atao ny manatratra ilay tanjon'ny fampitomboana ny vokatra amin'ny solosainantsika, indrindra rehefa nametraka a Rafitra miasa malalaka sy misokatra, ahoana GNU / Linux.
Tsara ny manamarika izany App atidoha, tsy fampiharana mavesatra be izany, izany hoe mandany be loatra CPU, RAM na HDD loharanoNa izany aza, ho an'ireo mpampiasa izay te hanana farafahakeliny fampiasa amin'ny solo-sain'izy ireo farafaharatsiny, tsara ny manazava izany atidoha dia mety hahatonga azy ireo handany vola sarobidy amin'izy ireo, indrindra rehefa ampiasaina, satria amin'ny fitsaharana, azo antoka azo ekena tokoa ny fanjifana loharanon-karena.
Araka izany, tsy amporisihina hampiasa azy io raha toa ka solosaina loharano ambany tokoa io na tianao ny hampiasa ny ankamaroan'ny% loharanon'ny solo-sainay amin'ny faritra na asa hafa.
1 Famokarana amin'ny GNU / Linux: Mianatra mampiasa Cerebro
1.1 Fametrahana voalohany ny ati-doha
1.3 Fomba fihodinana
1.4 Kitendry hitsin-dàlana (HotKeys)
1.4.1 Lakile C
1.4.2 E fanalahidy
1.4.3 Lakile M
1.4.4 O lakile
1.4.5 Lakile P
1.4.6 Q lakile
1.4.7 Lakile R
1.4.8 Lakile S
1.4.9 Lakile T
1.4.10 U key
1.4.11 V fanalahidy
1.4.12 Fanalahidy 1 ka hatramin'ny 9 ary lakile »*«
1.4.13 Fanalahidy »+» ary »-«
1.4.14 Fanalahidy "arosoy"
Famokarana amin'ny GNU / Linux: Mianatra mampiasa Cerebro
Fametrahana voalohany ny ati-doha
Ny fametrahana voalohany sy tena ilaina an'ny Cerebro tena fototra io. ny fikandrana fikandrana mametaka ireto masontsivana manaraka ireto:
Key Access Direct (HotKey): Ao amin'ity fizarana ity ny fampiharana dia mamela anao handamina ny fitambaran'ny lakile ilaina mba hampavitrika ilay rindranasa tsy mila izany totozy (totozy). Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny default, ny kombina fototra dia voalamina «Ctrl+Space». Saingy mamela azy hovaina io raha mametraka ny tenantsika eo amin'ny boatin-tsoratra isika ary manindry ny lakile «Ctrl» ary tsy mamoaka azy dia tsindrio ny bokotra faharoa hanoloana (hanolo) ny lakile «Space».
Firenena (Firenena): Amin'ity fizarana ity dia azontsika atao ny manondro an'i Cerebro firenentsika ankehitriny, ka afaka mampiasa an'io fampahalalana io izy ireo any aoriana mba hanamorana na hanatsara ny angon-drakitra hanome antsika. Ohatra, miaraka amin'ny a plugin (plugins) de toetr'andro) omeo anay angona manokana sy mivantana.
foto-kevitra: Amin'ity fizarana ity dia mahazo mifidy Lohahevitra manokana izahay hanova ny endrika hita maso amin'ny rindrambaiko an-tsary an'ny rindrambaiko. Ary mazava ho azy, mitondra lohahevitra «Dark», izay ankasitrahan'ny be sy ny maro matetika.
Safidy isan-karazany: Amin'ny faran'ny fikandrana fikandrana, aseho antsika ireo andiana safidy antsoina hoe:
Sokafy amin'ny fidirana: Mba hampianarana ny fampiharana hampidirina rehefa manomboka ny rafitra fandidiana ary miditra ao aminy ny mpampiasa. Ity safidy ity dia alefa amin'ny alàlan'ny default.
Asehoy ao amin'ny bara fisakafoana: Mba hilazana ny fampiharana hampiseho ny kisary iray ao aminy, ao amin'ny bara aseho eo ambonin'ny faritra fampandrenesana ny tontolon'ny Desktop ampiasaina. Ity safidy ity dia alefa amin'ny alàlan'ny default.
Developer Mode: Safidy mandroso ampiasain'ireo natokana hamongorana ny rindranasa ity, noho izany, io safidy io dia tsy hovelomina aorinan'ny toerana misy anao ary tsy tokony hasaina hampihetsika azy raha tsy mpampiasa mandroso ianao
Valiny madio amin'ny takona: Ity safidy ity dia milaza ny fampiharana hamafa ny fikarohana sy ny fizahana ifotony isaky ny manomboka indray izy io. Ity safidy ity dia alefa amin'ny alàlan'ny default.
Mandefasa statistika tsy mitonona anarana - mitaky famerenana: Ity safidy ity dia misy ahafahana mandefa fampahalalana momba ny fampiasana ny rindranasa amin'ireo mpamorona azy hampiasa azy io, hanatsara azy. Ity safidy ity dia tsy mavitrika amin'ny alàlan'ny default.
Alefaso ny tatitra fianjerana mandeha ho azy - mitaky famerenana indray: Ity safidy ity dia misy ahafahana mandefa fampahalalana momba ny lesoka amin'ny fampiharana amin'ireo mpampiasa azy hampiasa azy io, hanatsara azy. Ity safidy ity dia alefa amin'ny alàlan'ny default.
Ankoatr'izay, ny fampiasana ny totozy dia mihetsika amin'ny fampiharana, mamela ny fampiasana ny klavier hifindra ao anatiny io. Ireto no lakile nalamina ho an'ity:
Zana-tsipìka fitarihana « <- -> » y « ctrl + j/k » no ampiasaina hisafidianana ny entana manaraka na teo aloha.
LAKILEN'ILAY « enter » ary ny taratasy « o » no ampiasaina hisafidianana entana.
LAKILEN'ILAY « escape » na zana-tsipìka havia « <- » izy ireo dia ampiasaina hamerenana ny safidiny hiverina amin'ny lisitry ny valiny lehibe.
Kitendry hitsin-dàlana (HotKeys)
Fametrahana atidoha (Jereo Fampifanarahana)
Bika matoanteny (Jereo ny laharana kinova)
Fako tsy misy (Foana ny fako)
Fivoahan'ny atidoha (Akatona ny fampiharana)
Mialà (Vonoy ny volan'ny solosaina)
WiFi mandeha (Alefaso ny fitaovana WiFi an'ny solosaina)
Tapaka ny WiFi (Vonoy ny fitaovana WiFi an'ny solosaina)
Tantano plugins (Tantano plugins amin'ny atidoha)
Miala amin'ny atidoha (Mivoaha ny fampiharana amin'ny fanidiana azy)
Reload (Reload ny fampiharana)
torimaso (Alefaso ny fiasan'ny hibernate solosaina)
Afaho (Alefaso ny fikatsoan'ny solosaina)
Unmute (Alefaso ny volan'ny solosaina)
Fanalahidy 1 ka hatramin'ny 9 ary lakile »*«
famirapiratana (Haavo hazavana amin'ny efijery)
Fanalahidy »+» ary »-«
Volume (Haavo ny volan'ny solosaina)
Novonoina ny didy farany (Natao ny didy farany)
Amin'izao fotoana izao, atidoha manana izao manaraka izao misy plugins, izay horesahintsika ato aoriana sy amin'ny an-tsipiriany hanamorana ny fampiasana sy ny fampiharana azy ireo, ho an'ny vokatra amin'ireo mpampiasa azy rehetra, na inona na inona ny Rafitra miasa ampiasaina.
Izaho manokana dia mieritreritra fa ho tsara kokoa noho Ny atidoha dia tokony hihatsara amin'ny manaraka ho an'ny fampiasana tsara kokoa:
Avelao ny hamerina hanovana ny haben'ny fikandrana.
Avelao ny dock fikarohana mitady mitsingevana mankany amin'ny Desktop.
Alaharo ny fandikana azy amin'ny fiteny maro, indrindra ny Espaniola.
Manjary mifanentana kokoa amin'ireo kinova maodely kokoa amin'ny Distribution GNU / Linux.
Manavao fanavaozana matetika kokoa, fa tsy mifantoka fotsiny amin'ny fanampiana fanampiny nampiana.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Cerebro», ny faharoa amin'ny mpanoratra ahy ary ny fahatelo ao amin'ny Blog, manamora ny fampiasana sy fampifanarahana an'io fampiharana io amin'ireo mpampiasa izay maniry ny hampitombo ny vokatra ao amin'ny solosain-dry zareo, ary vokatr'izany dia tena fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Famokarana hatramin'ny farany ambony: Ahoana ny fampiasana ny rindranasa Brain amin'ny lalina?
HSequest dia hoy izy:
Amin'ireo fampiharana an'ity fomba ity dia aleoko 'Albert'.
Mamaly an'i HSequeda
Miarahaba anao HSequeda!
Misaotra anao tamin'ny hevitra sy soso-kevitrao. Efa mizaha toetra an'i "Albert" aho ary tena tsara izany. Azo antoka fa hanao lahatsoratra momba azy tsy ho ela aho.
Amin'izao fotoana izao dia hanao ny lahatsoratra fahatelo sy farany amin'ny Cerebro aho, manokana momba ny fikirakirana add-on (plugins) tena ilaina izay tokony hampitomboany ny vokatra.
Moltke dia hoy izy:
Nampiasa ati-doha elaela aho mandra-pahatonga azy hanome olana ahy, ary toa tsy mitombina ny fikojakojana / fivoarany; Tsy mbola nohavaozina nanomboka tamin'ny taona 2017. Niasa ho ahy ny Version 3.1 fa ny 3.2 kosa tsy nanao izany velively. Etsy ankilany, toa tsara kokoa i Alber amin'izany lafiny izany.
Mamaly an'i Moltke
Miarahaba anao Moltke!
Amin'izao fotoana izao, raha tianao, dia azonao atao ny mamaky ny lahatsoratra fahatelo sy farany amin'ny Cerebro, manokana momba ny fikirakirana add-on (plugins) tena ilaina izay tokony hampitomboany ny vokatra: https://blog.desdelinux.net/complementos-cerebro-plugins-aumentar-productividad/
Lisitry ny fizarana systemd maimaim-poana